A na -ahụ usoro ejiji n'oge opupu ihe ubi 2014 - Ụdị
Omume 10 iji nwalee na 2014
Na -ewetara echiche ejiji anyị na -akwado maka afọ na -abịa. Enwetụbeghị ụzọ dị ukwuu iji lee ihe egwu a!
Ụdị 2014: Ụkpụrụ Ngwakọta-'n'-Match
Ugbu a were mbipụta ndị a wee yikọ ha ọnụ. 'Enwere m nkwanye ugwu maka ndị maara ka esi agwakọta ya nke ọma,' ka ihe nlereanya Camille Rowe na -ekwu - na Burberry Prorsum, onye nrụpụta Christopher Bailey mere nke ahụ. Gbalịa ntụpọ polka na eriri, dị ka a na -ahụ ebe a, ma ọ bụ ọbụna zigzag nke ejiri plaid mee - ọ bụ ihe ejiji kwesịrị ekwesị iwere.
isi ihe na ntutu isi nchara nchara
Uwe elu, uwe mwụda, Burberry Prorsum.
Ụdị 2014: Mbipụta kacha mma na afọ
Ọ bụ oge dị mma, mara mma! Ma ị nwere mmasị na ifuru osisi (Tory Burch) ma ọ bụ nnukwu mbipụta nka (Céline), ọnọdụ obi ụtọ nke usoro mmiri a na -efe efe. Elettra Wiedemann, onye nlereanya na onye edemede kwuru, sị, '' Mgbe mbipụta dị iche na ibe ha, mgbe ị jikọtara ha, ha na -arụ ọrụ. Arlenis Sosa na -agbakwụnye, nke e sere ebe a: 'Yiri mbipụta na -atọ ụtọ, ma ha nọ n'isi ihe ma ọ bụ naanị ụda olu.'
Omume 2014: Ogologo nwa ehi ihe niile
Afọ ise gara aga abụwo nke dị mkpụmkpụ - ọ bụ oge Kardashian! Mana oge a na -eyi uwe mwụda ogologo na uwe ogologo ọkpa na -achị oke. 'Ogologo a na -atọka nkwonkwo ụkwụ,' ka ọ na -ekwu Ọmarịcha nchịkọta akụkọ ahịa Becky Malinsky. 'Ọ kacha mma iji akpụkpọ ụkwụ dị egwu.'
Site n'aka ekpe: n'elu, uwe mwụda, Marni; ikiri ụkwụ, Jil Sander Navy. Jaketị, elu, uwe ogologo ọkpa, ikiri ụkwụ, Proenza Schouler.
Ụdị 2014: Mania dara
Anne Christensen kwuru, sị, 'Metallics yiri ka ọ bụ oji ọhụrụ - ọkaibe, mara mma ma dịkwa mma. Anyị hụrụ akwa na -enwu enwu nke egosiri na Lanvin na - dị ka ebe a, na ụdị Malaika Firth - Proenza Schouler; ị ga -ahụkwa nhọrọ na ebe ọnụahịa ọ bụla na ụlọ ahịa.
Uwe, ipigide, ikiri ụkwụ, Proenza Schouler.
Ụdị 2014: Fringe, Fringe, Fringe
Esemokwu dị mkpụmkpụ pụtara n'okporo ụzọ awara awara awara, na oge mgbanwe na Tibi, ụmụ nwanyị na Altuzarra, uwe mwụda mara mma na Miu Miu, na akpa na Céline. Ịzụta otu akpa n'oge opupu ihe ubi a? Gaa maka boho fringe wee buru ya ebe niile - ya na ihe niile site na ogologo uwe ojii ruo jeans.
Ụdị 2014: Ụgbọ ala ... N'ikpeazụ!
Ha niile ugbu a: ' Ahuhu! 'Flat, ọkachasị ndị na-arụ ọrụ nke ọma nwere eriri dị obosara na akwa ukwu, juputara n'okporo ụzọ awara awara n'oge a. (Prada mere ọbụna akpụkpọ ụkwụ Teva nke ya!) Nkecha na ntụsara ahụ? Kedu ihe kpatara, daalụ, ụwa ejiji.
Uwe ntutu 2021 maka ogologo ntutu
Akpụkpọ ụkwụ, Nicholas Kirkwood x Suno. Maka agba ntu ya, nwalee Essie Nail Agba na Lilacism, $ 8.50, perfumania.com .
Ụdị 2014: Ihe egwuregwu
Elettra Wiedemann, (onye merela onwe ya triathlon n'onwe ya) na-ekwu, 'ahụrụ m uwe ndị sitere n'ike mmụọ nsọ n'anya. N'oge opupu ihe ubi a, anya egwuregwu ga -alaghachi - site na iberibe mmiri, ebe a, ruo uwe ogologo ọkpa egwu. Rịba ama ụlọ a ọzọ!
Jaketị, uwe ogologo ọkpa, akpụkpọ ụkwụ, Tommy Hilfiger; mgbaaka, fossil.
afọ ole ka ọ na -agbanwe nwunye tatum
Mark Leibowitz 8/9
Ụdị 2014: Ogologo ihe ọchị
Gaa n'ihu, ruffles; pleats bụ runway oge niile n'oge opupu ihe ubi a, anyị abanyela n'ime ihe nkiri ha nke oge a. Ndị na -ese ihe gosiri ha ụzọ abụọ, ogologo uwe na sketị Dries Van Noten, ebe a, so na ụdị ndị na -eyi akwa. Anyị na -akwado swishing.
Uwe niile na ngwa, Dries Van Noten.
Ụdị 2014: Uwe Menswear na Pleats dị mkpụmkpụ
Ụdị uwe mwụda nke ụmụ nwanyị mara mma anaghị apụ apụ, mana n'oge opupu ihe ubi a, ha na-enwetakwu egwuregwu, na-apụta na nchịkọta ndị nrụpụta n'ụwa niile, dị ka uwe elu na uwe. Alexander Wang chepụtara ụdị mkpụrụ osisi a kụrụ akụ - nke zuru oke ebe a na Camilla Rowe.
Ụzọ nke abụọ esi eme obi ụtọ? Na -eji egwu egwu '... Baby One More Time' mini. Ka mma igosi ụkwụ gị. Kedu mgbe mmiri dị?
Uwe elu, uwe mwụda, Alexander Wang.
kedu ihe ụbọchị nke ise pụtara maka ụmụ okorobịa
obere mermaid bulie ahịrị
kacha mma ngwaahịa maka anyanwụ tụrụ